ယော်ဒန်မြစ် | ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > ယော်ဒန်မြစ်
တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားတွင်တည်ရှိသည်, ဟီလ်တန်ဌာနမှူးကျွန်းတစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာကမ်းလှမ်း, တစ်လွှားဖြန့်ကြောင်းအပူပိုင်းကဲ့သို့လေထု 12 ပွညျသူပွညျသားမိုင်. အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာအပေါ်စီး, မြောက်မြားစွာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဆွဲဆောင်မှုဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာလိုရာခရီးမှာအပူဇော်ကြသည်. သငျသညျနက်ရှိုင်းသောနှစျသိမျ့သဲသို့သင့်ရဲ့ခြေချောင်းနစ်မြုပ်ရန်ဆန္ဒရှိသို့မဟုတ်ပြင်ပအားကစားဖြစ်ရပ်များတစ်ခုဌန်ကိုခံစားချင်ပါတယ်ရှိမရှိ, ဟီလ်တန်ဌာနမှူးသင်၏နောက်အားလပ်ရက်များအတွက်ထိုက်တန်တည်နေရာစေသည်. အောက်တွင်သင်တို့ဆီသို့ခရီးစဉ်စီစဉ်ငါးအကြောင်းရင်းများကိုတွေ့လိမ့်မည် ...
အခါသမယတွင်လူဦးသာအလွန်ပုံမှန်နှင့်ကို un-စွန့်စားခရီးစဉ်သွားရောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုံးများယခင်ကရှိခြင်းကိုပဌနာ. One World Tours မှများအတွက်စစ်ဆင်ရေး၏ဗြိတိန်ဒါရိုက်တာကဒီမှာသင်သည်သင်၏နောက်အားလပ်ရက်သို့မဟုတ်အားလပ်ရက်များအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေခြင်းငှါအနည်းငယ်သောအရပ်တို့ကိုအဘို့အကြှနျုပျ၏အကြံပြုချက်ရဲ့အဖြစ်.
အမ်စတာဒမ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးအံ့သြဖွယ်သောမြို့များအကြားနေရာတစ်နေရာရှာတွေ့ထားပါတယ်, ၎င်း၏ 17 ရာစုဗိသုကာစတိုင်များမှ, ၎င်း၏ရေပန်းစားရေလမ်း, အလွအိပ်ရာနှင့်နံနက်စာသုံးဆောင်ဘို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေကတော့နှင့်မရေမတွက်နိုင်သောရွေးချယ်စရာ. ကသေးငယ်တဲ့မြို့ဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်း, ဒါကြောင့်ဧည့်သည်တစ်ဦးတွေအများကြီးရာပူဇော်သက္ကာကိုဝါကြွားနိုင်ပါတယ်. အမ်စတာဒမ်မှအိပ်ရာနှင့်နံနက်စာခရီးသွားများအတွက်ဤမြို့ကိုလောကီသားတို့သည်အကျော်ကြားဆွဲဆောင်မှုလက်လွတ်ဘယ်တော့မှသင့်တယ်, ကဲ့သို့, 250-အခန်းထဲမှာ Rijksmuseum,အဆိုပါ Van Gogh ပြတိုက်, အဆိုပါအန်းဖရန့်အိမ်, အဆိုပါ Ro ...
သငျသညျနယူးယောက်ထမင်းစားခန်းတစ်အရသာရှိသည်ဖို့ကြိုက်တယ်သို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင် swanky စားသောက်ဆိုင်တည်ဆောက်မယ်လို့ရှိမရှိ, တဦးတည်းတကယ်တော့အကြွင်းအကျန်: သငျသညျ gastronomic အပျော်အပါးအလွန်အလိုရှိသည်ဆိုပါကနယူးယောက်မြို့ဖြစ်ဖို့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. နယူးယောက်မြို့ကလူအများကြီးအရာတွေအများကြီးဖြစ်ပါသည်. တချို့ကနယူးယောက်စဉ်းစားပါ, ethnocentrically နည်းနည်းဆိုသော်ငြား, ကမ္ဘာ၏အလယ်ဗဟိုအဖြစ်. အခြားသူများအား, သို့သော်, နယူးယောက်ရုံတစျခုတှငျနထေိုငျဖို့စျေးအကြီးဆုံးမြို့ကြီးများဖြစ်ပါသည်. အချို့သောအဘို့, New York ကအမြဲတမ်းစက်တင်ဘာလ၏ဝမ်းနည်းဖွယ်သတိပေးချက်ပါလိမ့်မယ် 11 အလှမျးအဆှေး. ဒါပေမယ့်အစားအသောက်ကျွမ်းကျင်သူမှ, New York ကမျှသံသယကိုအစဉ်အမြဲမိမိတို့စိတ်နှလုံးထဲမှာနေရာတစ်နေရာတောင်းဆိုမယ်လို့.
Think about planning your cheap holidays in Amsterdam for New Years Eve. You will have the time of your life. It is better than going to the Big Apple. You will have dancing, အစာ, အချိုရည်, fireworks and entire day leading up to and after of nothing more than fun. Dam Square is one place you will find many people laughing and celebrating the coming of the New Year. All you need to do is be there for the excitement. Another popular area is the neighborhood of Jordan and the Wes...
Petra ၏ရှေးဟောင်းမြို့ (ဂရိရော့ခ်) ယော်ဒန်မြစ်၌အဆင်းလှသောရှေးဟောင်းမြို့ဖြစ်၏. ဒါဟာသူ့ရဲ့သဘာဝကရော့ခ်ပုံသဏ္ဍာန်ဗိသုကာများအတွက်ကမ္ဘာကျော်ဖြစ်ပါသည်. ဇူလိုင်လမှာ 2007, Petra ကမ္ဘာ့ဖလား၏နယူးခုနစ်အံ့ဖွယ်များအနက်အမည်ရှိ.
ဘာလီကျွန်း ‘ Paradise of Indonesia
ဒါဟာကမ်းလှမ်းမှုကိုမှ Alaska ရှိပါတယ်အရာအားလုံးတွေ့ကြုံခံစားဖို့တစ်သက်တာယူမယ်လို့
မင်္ဂလာပါ Nova Scotia မှစ. – အပိုင်း 19 – Halifax ခုနှစ်တွင်ရောက်ရှိလာထိုအခါတစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဂီတဖျော်ဖြေမှု – စည်!